Coinbase fizahan-toetra farany dia manomboka Segwit - Blockchain News
Coinbase no nanambara tao amin'ny Twitter fa Bitcoin SegWit fanaovana fitiliana dia amin'ny dingana farany, ary ho azo Bitcoin nandefa dia nandray tao amin'ny “ny herinandro vitsivitsy manaraka.” Izany dia natao hampihenana ny saram Bitcoin sy ny famindrana fotoana, ary koa mampihena ny enta-mavesatra ao amin'ny tambajotra.
BTC: USD tsiroaroa amin'ny fifanakalozana GDAX Coinbase ny tantara nandritra ny 5% bitcoin ny isan'andro ny boky ara-barotra, araka ny CoinMarketCap. Rehefa hametraka eo amin'ny hafa broker BTC Coinbase service, vola hafa tsiroaroa sy ny varotra azo antoka ny mihevitra fa ny ampahany be isan'andro amin'ny alalan'ny varotra mitranga Coinbase / GDAX.
Araka izany fampandrosoana izany feasibly mety hisy fiantraikany amin'ny Global miavaka Bitcoin fotoana sy ny saram barotra.
Previous Post:Ao amin'ny firenena samy hafa, Mety tsy hitovy ny vidin'ny bitcoin
Next Post:Efatra ihany Crypto fifanakalozana mankatò ny fepetra any amin'ny tany atsimo Koreana regulator